MUQDISHO, Soomaaliya - Xilli amniga Muqdisho uu yahay mid aan la isku halleyn karin, oo dhawaan lagu afduubey Gabar u dhalatay dalka Jarmalka, oo la shaqeynaysa ICRC ayaa waxay dowladda Soomaaliya digniin u jeedisay Hay'adaha samafalka.
Wasiirka Qorsheynta ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Jamaal Maxamed Xasan ayaa ku wargeliyay dhamaan hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya dalka inay xafiisyadooda usoo wareejiyaan Muqdisho, kana soo guuraan magaalada Nairobi.
"Waxaan maanta [29-ka bishan] la kulmay hogaanka NGO-yada ka shaqeeya Soomaaliya, waxaan ku wargeliyay go'aanka dowladda oo ah inay xafiisyadooda usoo wareejiyaan Muqdisho, laga billaabo 1-da January, 2019, cidii u hogaansami wayda amarkan waxaa lagala noqonayaa ruqasadda iyo diiwaangelinta," ayuu yiri Wasiirka.
Wuxuu tallaabadan u sababeeyay Jamaal inay shaqo abuur ka heleen dhalinyaro Soomaaliyeed, inay bixiyaan lacagta canshuurta ah, in kala socdo howlaha ay ka fulinayaan dalka iyo in dowladda Soomaaliyeed ay xog ogaal ah unoqoto hadey shaqadooda ugudanayaa si wanaagsan.
Hay'adaha caalamiga ah ee arrimaha mashaarciiyadda ka fuliya dalka ayaa inta badan waxay kaliya ay yimaadaan Magaaladda Muqdisho iyo meelo kale oo wadanka kamid ah marka ay kaliya fulinayaan mashruuc, taasoo dowladdu ka qaylo dhaamisay.
"Waqtigii shaqo maalmeed loo imaanayey Muqdisho ama meelo kale oo dalka kamid ah, oo layska fadhinayay inta kale Nairobi way dhamaantay. Waxaan usheegaynaa Hay'addaha mashriicyadda dalka ka fuliya ee caalamiga ah inay caasimadda yimaadaan," ayuu yiri Wasiir Jamaal.
Inta ka harsan sanadkaan 2018 ayuu Wasiirka Qorshaynta Soomaaliya ku faray Hay'addaha inay xarumo uga furtaan Magaaladda Muqdisho, isaga oo carabka ku dhuftay in Hay'addii amarka wasaaradda uhogaan-sami wayday ay Ruqsada kala noqoneyso dowladda.
"Waa inay inta ka harsan sanadkaan ku yimaadaan Muqdisho, ayna xafiisyo uga furtaan. Hay'addii samey wayda dowladdu lama shaqayeyso, waana kala noqoneynaa Ruqsadda shaqo oo ay dalka ku joogto," ayuu hadalkiisa kusii daray Wasiir Jamaal.
Hay'addaha caalamiga ah ee mashaariicyadda ka fuliya dalka ayaa sababaha aysan dalka uga howlgeli karin waxay ku sheegayaan inay tahay amaanka oo liita, waxaanan laga dhowr-sugayaa sida ay udhaqan-geliyaan amarka kasoo baxay Wasaarada Qorshaynta dalka.
Rag Muqdisho ka fuliyey qaraxyo galaaftay 70 ruux oo la xukumay
Soomaliya 20.05.2019. 12:41
Tahliil oo damaanad lagu sii deynayo xili ay soo idlaatay dhageysiga kiiska
Soomaliya 27.04.2019. 18:59
Maxay tahay sababta dib loogu dhigay kiiska Cabdirisaaq Tahliil?
Puntland 13.04.2019. 17:22
Aragtiyaha is-diidan ee xukuumada iyo mucaaradka ka haystaan amniga
Soomaliya 24.03.2019. 13:12